Sibe sesixwayisa nge-superstate ezayo. Manje isihloko esikhulu e-Aftonbladet siyisiqinisekiso salokho, eminyakeni engu-18 kamuva - kodwa sekwephuze kakhulu kunangaphambili.
Uma ubheka nje ngokombono womuntu, ungabandakanyeka futhi ushaye ihlombe okwenzekayo, kepha labo abakholelwa emazwini eBhayibheli ayisiprofetho babona enye into. Kubaluleke kakhulu ukukholelwa ezwini likaNkulunkulu lesiprofetho, ukungasinaki futhi ungaqali ukukhuluma ngokucabanga kanye nokuchazwa masisha lapho kwethulwa igama lesiprofetho. Lokhu kungenziwa kuze kufike usuku ikhethini liwa bese kuvulwa amehlo.
Ukubusa kwamandla amakhulu endaweni yoMbuso WaseRoma wasendulo
Lokhu kungumphumela wesinqumo esithathwe eBrussels. Kwakuyisinyathelo esinomlando futhi esingesincane isinyathelo sokuphokophela ekufezekisweni kwalokho iziprofetho ezixwayise ukuthi kuzofika. (Izithombe-skrini ezivela e-Aftonbladet naseVärlden Idag.)
Ngenkathi abantu baseYurophu beseholidini emazweni amaningi, kwenziwa isinqumo ngenhla kwamakhanda abo abaningi ababengaliqondi. Ngisho namaKhristu angenandaba negama lesiprofetho ayengenangqondo.
Okumenyezelwe selokhu kwabhalwa umbono wokuqala weNcwadi Yesambulo uxwayisiwe ngombuso omkhulu wamandla endaweni yoMbuso WaseRoma wasendulo, sinawo manje - i-EU. Kuzokwenzeka ngesikhathi esedlulele lapho esikhona manje.
Ngenkathi abaningi bekhuluma nge-EU njengephrojekthi yokuthula, lokhu kuyenzeka. Ngenkulumo yokubambisana yokuthula phakathi kwamazwe aseYurophu, ungaletha izindimbane ndawonye - wonke umuntu ufuna ukuthula. Kepha umuntu akanalo ulwazi lokuthi umkhiqizo wokuphela walesi sakhiwo samandla esikhulu uzosho ukuthini.
Uma ubheka nje ngokombono womuntu, ungabandakanyeka futhi ushaye ihlombe okwenzekayo, kepha labo abakholelwa emazwini eBhayibheli ayisiprofetho babona enye into.
Kubaluleke kakhulu ukukholelwa ezwini likaNkulunkulu lesiprofetho, ukungasinaki futhi ungaqali ukukhuluma ngokucabanga kanye nokuchazwa masisha lapho kwethulwa igama lesiprofetho.
Lokhu kungenziwa kuze kufike usuku ikhethini liwa bese kuvulwa amehlo. Akuyona inhloso yokuthi lapho-ke kufanele sikubone okwenzekile - kufanele sibe namehlo angokwesiprofetho futhi sibone okwenzekayo manje.
Ukushoda okukhulu kwabaprofethi
Ngokushoda okukhulu kwabaprofethi ezweni lethu, "amatshe angakhuluma." Manje uGöran Greider ukwenzile e-Aftonbladet ngoJulayi 22. Ubhala i-athikili ngesihloko esithi: "Manje sekwakhiwa i-superstate". Ukhuluma ngobukhulu balokhu: “Ngakho-ke akusiyimi eqhaqhazelayo. Lowo ngumhlabathi. ”
Ubuye abhale athi: "Abaningi abaqinisekisa ukuzalwa kwalesi sifundazwe esisha se-EU bayajabula ukuthi, ngokwesibonelo, ubuzwe baseSweden" bashaywa "- kepha bangaboni ukuthi bona uqobo baziphatha njengabezizwe begazi eligcwele igazi, abagubha ngokuzumayo ukuzalwa kwesimo esikhulu, i-United's United Izwe. "
Kwabhalwa izindatshana eziningi
KuFlamor sibhale izindatshana eziningi mayelana nentuthuko eYurophu eminyakeni edlule, cishe ezingama-50 zazo asekhasini lethu uma ucindezela ukhiye we-EU. Ngezansi kungenye yezindatshana esazibhala ngo-2002.